१ जना संक्रमितले कतिलाई सार्छ कोरोना ? - समय-समाचार
१९ असार २०७७, शुक्रबार ००:२८
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १४ हजार नाघ्यो । यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा छिटो सर्छ । त्यसो हो भने १ जना संक्रमितले कति जनालाई सार्छ त ?
चीनमा एउटा मान्छेले २ देखि ३ जनालाई सारेको अध्ययनले देखाउँछ । युरोप र अमेरिकामा एक संक्रमितबाट १८ जनालाई पनि सरेको छ । नेपालमै वीरगञ्जमा एक जनाले १८ जनालाई सारेको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘एक संक्रमितले कतिलाई सार्छ भन्ने कुरा मान्छेले कति सावधानी अपनाउँछ, त्यसमा भर पर्छ,’ त्रिविको माइक्रोवायोलोजी विभागका प्रमुख डा. मेघराज बन्जाराले भने, ‘देशअनुसार संक्रमितको दर फरक छ ।’
नेपालमा सुरुको चरणमा एक व्यक्तिबाट एक जनामा सरेको उनले बताए । ‘सुरुको चरणमा एक व्यक्तिबाट एक जनामा सरेको थियो । पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । अहिलेको दर कति हो, यसको अनुसन्धान गनुपर्छ ।’
संक्रमित र अरुले पनि सावधानी अपनायो भने भाइरस सर्ने दर कम हुने उनले बताए । ‘संक्रमितले सावधानी अपनायो भने कम हुन्छ । अरु जसमा सर्छ, उनीहरूले गरेको रोकथाममा पनि भर पर्छ । संक्रमितले अरुलाई नसरोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।